Docker: Sidee loo rakibaa nooca ugu dambeeya ee xasilloon DEBIAN 10? | Laga soo bilaabo Linux
La hufnaanta Nidaamyada Howlgalka iyo Codsiyada ama Nidaamyada asal ahaan waxay ka kooban tahay awood u lahaanshaha isla wadaagida hardware, dhowr waxyaalood oo ka mid ah kuwan dhammaantood si madax-bannaan u shaqeeya.
Marka ay timaado in wax la barto Nidaamyada hawlgalka con tiknoolajiyada bilaashka ah, bilaashka ah iyo / ama furan, teknolojiyada ama codsiyada ayaa badanaa la door bidaa, sida Promox, Xen, VirtualBox, QEMU ama KVM. Laakiin markay tahay Codsiyada ama Nidaamyada, badanaa waxaa loo adeegsadaa badanaa Kubernetes ama Docker.
2-kan dambe ee dambe waa tiknoolajiyadda ku-habboonaanta weel-ku-saleysan. Arinta ah Docker, waxaa lagu sii daayay sano 2013, iyada oo qayb ka ah a horumarinta isha furan loo yaqaan Mashiinka Docker. Taasi waxay ka faa'iideysatay horumarkii jiray ee waqtigaas, taas oo ah, fikradaha iyo aqoonta ku saabsan weelasha illaa taariikhda Nidaamyada hawlgalka bilaash iyo / ama furan (Unix / Linux)sida koox kooxeedyada iyo meelaha magacyada, si loo hormariyo aaggan soo kordhaya ee tikniyoolajiyadda.
Waqtiyadii hore ayaan ka soo hadalnay Docker, taas oo ah sababta aynaan u guda gali doonin waxa ay tahay, ama astaamaheeda, tas-hiilaadkiisa, ama tafaasiisha kale ama walxaha ay yihiin. Marka, waxaan runtii diirada saari doonaa rakibida nooca hadda (19.03.8) ku saabsan DEBIAN 10 (Buster) y - GNU / Linux Distros, la mid ah ama ku saleysan kuwan, sida MX Linux 19.
Si kastaba ha noqotee, wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa qoraaladeennii hore Docker.
1 Waa maxay Kunteenar?
2 Docker: Nidaamka rakibaadda ee DEBIAN 10 (Buster)
2.1 A. Tallaabada 1
2.2 B. Tallaabada 2
2.3 C. Tallaabada 3
2.4 D. Tallaabada 4
2.5 E. Tallaabada 5
2.6 F. Tallaabada 6
2.7 G. Tallaabada 7
2.8 H. Tallaabada 8
Waa maxay Kunteenar?
Ka hor intaadan bilaabin hawsha rakibida tan tiknoolajiyadda ku-habboonaanta weel-ku-saleysan, si aad hadhow awood ugu yeelatid inaad ku rakibtid barnaamij ama nidaam kasta adoo maraya a "Weelka", waxaa muhiim ah in loo caddeeyo inta fahmaysa, waxa weeye weelku.
Xigasho HPE (Hewlett Packard Enterprise) bogga rasmiga ah ku saabsan tiknoolajiyada la yiri, waxay noo sheegaysaa waxyaabaha soo socda:
"Weelasha Codsigu waa miisaan fudud, jawi-socodsiiya oo bixiya codsiyo feylasha, doorsoomayaasha, iyo maktabadaha ay u baahan yihiin inay shaqeeyaan, sidaasna ku siyaadiyaan adeegsigooda.".
"In kasta oo Mashiinnada Dhaqameed ee Fudud (VMs) ay u oggolaanayaan hufnaanta kaabayaasha xisaabinta, Kunteenarradu waxay awood u siinayaan kuwa barnaamijyada barnaamijyada. Si ka duwan Mashiinnada Farsamada, Kunteenarradu waxay adeegsadaan Nidaamka Hawlgal ee ay martida u yihiin (OS) halkii ay iyagu iska siin lahaayeen".
Docker: Nidaamka rakibaadda ee DEBIAN 10 (Buster)
A. Tallaabada 1
Diyaari Nidaamka hawlgalka rakibaadda.
B. Tallaabada 2
Kala soo bax furaha Keyd rasmi ah, kaydinta keydka rasmiga ah oo ansax faylasha laga heli karo, noocayaga GNU / Linux Distro. Dacwadeena, DEBIAN 10 (Buster) ama wax kale - GNU / Linux Distro, la mid ah ama ku saleysan, sida MX Linux 19.
C. Tallaabada 3
Ku rakib arjiga oo ku tali faylasha muhiimka ah.
D. Tallaabada 4
Xaqiiji rakibida arjiga, socodsiinta rakibida weelka tijaabada ee loo yaqaan Hello-adduunka.
E. Tallaabada 5
Hubi nooca barnaamijka lagu rakibay.
F. Tallaabada 6
Tallaabadani waa mid ikhtiyaari ah, maadaama ay asal ahaan tahay in la xaqiijiyo in weelkii horay loo rakibay aan la soo dejin oo aan dib loo rakibin, markii laga codsado inuu mar kale ordo.
G. Tallaabada 7
Tallaabadan kale ayaa sidoo kale loo qaadan karaa ikhtiyaari, maadaama ay asal ahaan tahay in la oggolaado a "Isticmaalaha aan maamulka lahayn" Waad wadi kartaa weel adiga oo aan u baahnayn rukhsad "maamule". Daraasaddan markay tahay, rukhsad ayaa la siin doonaa isticmaale jira oo la magacaabay "Sysadmin".
H. Tallaabada 8
Ugu dambeyntii, waxa ugu fiican ka hor intaadan bilaabin inaad isticmaasho gebi ahaanba Docker, waa in dib loo bilaabo oo la ansaxiyo bilowga Adeegga iyo fulinta weelka tijaabada.
Mar dambe, daabacaad kale oo ku saabsan tiknoolajiyada la sheegay ama la xiriirta, waxaan isku dayi doonnaa rakibidda codsi kale ama nidaam kale si aan u sii wadno barashada hanashada. Si kastaba ha noqotee, inta is-baray ama xiisaha leh, waxaa jira buug-gacmeed aad u fiican oo ka kooban macluumaad dheeraad ah oo la xiriira rakibaadda DEBIAN GNU / Linux 9/10 qaybta dukumintiyada ee barta rasmiga ah ee docker.
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto inaad wax yar ka ogaato docker, sida ay u shaqeyso oo loogu isticmaalo nolosha dhabta ah, waxaad ka heli kartaa 2 xiriiriyeyaasha soo socda: Koofiyadaha Cas y waa amazon.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan barnaamijkan aadka u wanaagsan iyo «Tecnología de Virtualización basada en Contenedores» wac «Docker», kaas oo bixiya lakab dheeri ah oo soo saarid ah iyo otomaatig u noqoshada codsi dhowr ah Nidaamyada hawlgalka; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Docker: Sidee loo rakibaa nooca ugu dambeeya ee xasilloon DEBIAN 10?